Fanapahan-kevitra momba ny fakan-tsary amin'ny vatana mety | Vahaolana OMG
Manapa-kevitra amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana mety
Ny fakan-tsary misy vatana dia fakan-tsary manokana mipetaka amin'ny vatan'ny olona iray. Ireo fakantsary ireo dia manome fanampiana sy fanohanana ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fandraisam-peo izay rehetra niainan'izy ireo. Ny fakantsary efa nitazona azy dia nalaza tamin'ny taona ho avy ary nanomboka nampiasaina matetika. Androany, afaka mahita ny ankamaroan'ny polisy isika izay mampiasa fakan-tsary mitazona vatana. Afaka mahita karazana fakantsary raisina eo an-tsena mora isika. Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia efa nampiasan'ny departemantan'ny polisy ny ankamaroany fa efa nampiasaina tamin'ny zavatra hafa maro koa izy ireo. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo fampiasana ireo fakantsary ireo.
Mampiasa fakantsary miakanjo:
Amin'ny ankapobeny, ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia ampiasain'ny departemantan'ny polisy. Manome azy ireo fanohanana sy fanohanana ary fanampiana amin'ny fanadihadiana sy fanaraha-maso ataon'izy ireo. Fa ankoatra an'io, ny fakantsary manana vatana dia misy fampiasana hafa maro. Tahaka ny fanaraha-maso, azo ampiasaina amin'ny firaketana torolàlana. Araka ny fantatsika dia mipetaka amin'ny vatana ny fakan-tsary azo avy amin'ny vatana ka mampiseho ireo zavatra rehetra iainan'ny mpampiasa. Amin'izany fomba izany, ireo fakantsary ireo dia azo ampiasaina amin'ny firaketana torolàlana sy kilasy ho an'ny rookie. Afaka maka ny ohatry ny mpanao ady totohondry isika. Afaka mampiasa fakantsary miakanjoana izy mba hanomezana firaketana an-tsary mivantana momba ny lalao. Manamora ny fianarana ny hafa izany. Ankoatr'izay, azontsika atao koa ny mampiasa ireo fakantsary ireo mandritra ny fandefasana mivantana mba handrakofana.
Ny antony nampidirana ireo fampiasana azy dia ny hilaza amin'ireo mpamaky fa tsy fakan-draharahan'ny polisy ao amin'ny polisy ihany ny fakantsary fiakanjo. Manana fampiharana hafa hafa koa. Izany dia manome anay karazan'entana marobe amin'ireto varotra ireto ka manasarotra ny safidintsika. Noho izany, hanampy anao izahay amin'ny fisafidianana fakantsary tena tsara indrindra ho an'ny tenanao.
Ahoana no fisafidianana ireo fakan-tsary tsara indrindra:
Misy endri-javatra lehibe sasany izay milaza amintsika raha misafidy ny fakan-tsary mifono vatana mety isika. Tamin'ny voalohany, ny mpampiasa dia tsy maintsy mahalala ny antony hividianany ny fakan-tsary mifono vatana. Raha miasa ao amin'ny departemantan'ny polisy izy, dia tsy maintsy maniry ireo karazana fakantsary ireo izy. Raha tiany ny fandraketana ny fampianarana dia tokony handeha amin'ny fakantsary hafa izy. Ny rehetra manaraka ny fakan-tsary dia miankina amin'ny tanjona izay isafidianana ny fakantsary. Avy eo tonga ny faharetan'ny fakantsary. Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia tsy maintsy ho matevina tsy tapaka. Amin'ny tranga sasany, mianjera amin'ny tany ny fakantsary na mahazo fifandonana amin'ny zavatra hafa. Tsy tokony hanimba ny faritra fakan-tsary izany. Aorian'io dia tsy tokony ho tsara ny fotoana famerana ny bateria. Ny kalitao firaketana dia tsy maintsy ho tsara. Izany no zavatra lehibe izay tokony hifantohana. Antony iray izay tsy azo atao ambanin-javatra na inona na inona izany. Noho izany, ny vokatra fakana sary fakan-tsary dia tsy maintsy ho tsara. Betsaka ny zavatra hafa izay tsy maintsy dinihina. Andao hasiantsika antsipiriany koa ireo zavatra ireo.
Ny antony hividianana ny fakan-tsary:
Ny zava-dehibe voalohany tsy maintsy hoeritreretin'ny olona alohan'ny hisafidianany fakan-tsary tsara tarehy no antony anaovana ny fakantsary. Ny tanjona lehibe amin'ny fakantsary manana kapa-batana dia ampiasain'ny departemantan'ny polisy. Ny ankamaroan'ny polisy dia nahitana fakantsary mandeha amin'ny vatana. Ireo fakantsary ireo dia samy hafa amin'ny fakantsary hafa eny an-tsena. Rehefa ampiasaina ireo fakantsary ireo ho an'ny tanjona fanaraha-maso dia tsy maintsy hatsangana ao an-tsaina izany. Ny fakan-tsary manokana dia atao ao amin'ny toerana voalohany mitadidy izany. Ireo fakantsary ireo dia afaka manome antsika fankasitrahana tarehy, ny fampahafantarana biometrika ary ny kalitao tsara izay tsy ampy amin'ny fakantsary hafa. Izany dia milaza amintsika ny maha-zava-dehibe ny fikasana amin'ny fisafidianana fakantsary raikitra amin'ny vatana.
Manao lisitr'ireo endri-javatra:
Ity no zavatra lehibe hafa tsy maintsy ataonao alohan'ny hisafidianana ny fakan-tsary tsara indrindra ho an'ny tenanao. Raha misy olona manana ny fiasa rehetra voasoratra miaraka aminy, dia afaka misafidy fitaovana tsara izy amin'ny fampiasana azy mora foana ao anatin'ny fotoana fohy. Feno vokatra isan-karazany ny tsena izay hampifangaro ny mpanjifa. Na dia ny mpanjifa aza manana ny zavatra rehetra ilainy ao an-tsainy, fa ho sosotra izy rehefa avy namaky vokatra be. Izany no hitarika azy hividy vokatra ratsy sy tsy mahomby ho an'ny tenany. Ny vokatra dia tokony ho tsara any am-piasana fa tsy mety ho an'ny mpampiasa izany. Noho izany, dia ilaina ny manamboatra lisitr'ireo fangatahana anao. Izany dia hitarika anao hividy fitaovana iray mety miasa ary koa mety amin'ny asanao izy io.
Surfing Online ho an'ny vokatra irina:
Izy io koa dia tena zavatra goavana tokony hatao alohan'ny hividianana ny zavatra tsara indrindra ao an-tsena. Ny fakantsary vita amin'ny vatana no nitazona ny fironana nandritra izay taona vitsivitsy izay. Ny ankamaroan'ny orinasa dia nametraka fakan-tsary vita amin'ny vatana ho an'ny mpiambina azy. Natao izany noho ny fitomboan'ny fanatanjahantena nataon-dry zareo. Orinasa maro no nanomboka nanao fakantsary raikitra ho an'ny tenany mba hivarotra azy ireo eny an-tsena. Nahatonga fakantsary marobe vita amin'ny vatana eny an-tsena izany. Noho izany, alohan'ny handeha amin'ny tsena sy hividy ny fakan-tsary tsara indrindra amin'ny olona, ​​dia tsy maintsy mikaroka azy amin'ny Internet ny olona iray. Tsy maintsy mamaky ny famerenan'ny mpampiasa hafa izy izay hampahazava ny fisalasalany momba ilay vokatra.
Fandefasana bateria tsara:
Ny zava-dehibe dia tokony hatao ao an-tsaina alohan'ny hividianana ny fakan-tsary tsara indrindra. Ny fametrahana batterie dia iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja indrindra amin'ny fakantsary fitaovan'ny vatana. Tsy maintsy manohana fotoana fametahana bateria tsara amin'ny firaketana firaketana efa ela. Araka ny efa fantatsika dia ny ivelan'ny tranonay no ankamaroan'ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana. Ho an'ny fampiasana mandritra ny andro iray manontolo, ny fakantsary dia tsy maintsy manana fotoana ahafahana mandeha amin'ny batterie izay mitazona ny fiasan'ny fakantsary ary tsy mamela azy ho faty. Tsy maintsy manana fanoloana bateria vonjy maika ihany koa izay mety soloina ilay bateria maty mba hahafahan'ilay fakan-tsary vetivety kokoa. Manana ny ohatry ny departemantan'ny polisy izahay. Amin'izy ireo dia mila fakantsary azo itokisana izy ireo mandritra ny andro iray manontolo. Tsy maintsy mavitrika ireo fakan-tsary raha misy fitantarana fanadihadiana na firaketana firaketana hafa. Mila fakantsary maotera vatana misy fotoana mety tsara. Noho izany, raha tsorina, raha maniry ny hahatanteraka ny tanjonao ianao, dia tsy maintsy manoratra fotoana mahafehy tsara ianao amin'ny lisitra.
Vidiny azo amidy:
Nahazo anjara lehibe tamin'ny fividianana vokatra samihafa ihany koa ny vidiny. Tamin'ny ankapobeny dia nanao fenitra ny olona. Mino izy ireo fa raha te hanana vokatra tsara indrindra ianao, dia tsy maintsy mandoa vidiny tsara ianao amin'izany vokatra izany. Diso anefa io fiheverana io. Raha mikaroka tsara ny tsena ho an'ny zavatra tsara indrindra ianao dia mety ho manana vokatra tsara indrindra ianao amin'ny vidiny mora. Raha mitady ny tsena isika dia mahita ny fakan-tsary miasa tsara indrindra amin'ny vidiny lafo amin'ny $ 100- $ 150. Ny fakan-tsary tsara indrindra an'ny kapoaka dia tsy maintsy misy vidiny eo amin'ny lafiny vidiny. Tsy tokony ho mavesatra amin'ny paosinao izany.
Mamoaka sary sy fakana sary avokoa ireo fakantsary. Toy izany koa ny fakan-tsary namboarina amin'ny vatana. Ny kalitao an-tsoratra dia iray amin'ireo fiasa lehibe amin'ny fakantsary raikitra amin'ny vatana. Ireo fakantsary ireo dia mila mirakitra an-tsoratra ny zava-drehetra sy miseho rehetra eo anoloan'ilay mpampiasa. Izany dia milaza amintsika ny kalitao amin'ny fakantsary. Tsy nahomby tamin'ny ankamaroany ny fanamby lehibe izay fandraketana mandritra ny hetsika mitohy. Fanamby sarotra ho an'ny fakantsary izany. Tsy mihetsika ny mpampiasa mandritra ny fotoana izay tena sarotra ny fandraisam-peo. Ny horonantsary voarakitra dia hovaliana amin'ity tranga ity. Ka raha te hisafidy ny fakan-tsary tsara indrindra isika, dia tsy maintsy mijery ny hatsaran'ny firaketana azy io rehefa mamindra azy io.
Ny habeny sy ny lanjan'ny fakan-tsary:
Raha mitady fakantsary faran'izay tsara indrindra ao amin'ny tsena ianao dia tsy maintsy mandinika ireo manana habe kely kokoa sy maivana kokoa. Ny lanjan'ny fakan-tsary dia manan-danja tahaka ny hoe apetrak'ilay mpampiasa azy amin'ny lohany izany, tsy hamela azy hampandeha malalaka ny lohany izany ary ho lasa olana. Ny halehibeny koa dia manan-danja satria ny fakantsary dia tokony ho kely kokoa ny habe Raha lehibe kokoa ny fakantsary dia ho ratsy izy io ary ho malaza izay ratsy. Noho izany, ny haben'ny sy ny lanjan'ny fakantsary dia tsy maintsy hojerena mandritra ny fividianana ireo fakan-tsary tsara indrindra amin'ny vatany.
Toerana fitahirizana ny fakan-tsary:
Ny fitahirizana dia iray amin'ireo toetoetra tena ilaina koa amin'ny fakantsary mila karakaraina. Indrindra raha misy fakantsary mandeha amin'ny vatana, izay zatra mirakitra lahatsary mitohy. Horoahana ary tsy hahomby izany raha feno ny fotoana fitahirizana id. Noho izany, raha misafidy ny fakantsary tena tsara indrindra ny olona dia tokony hitadidy izany.
Fampiasa hafa izay tokony hananan'ny fakan-tsary tsara indrindra an'ny Body-Worn:
Misy endri-javatra maro hafa izay tsy maintsy tavela ao an-tsaina raha misafidy ny fakan-tsary tsara indrindra ho an'ny tenanao. Tsy maintsy zoro sisiny hapetraka malalaka sy malalaka faritra. Tsy maintsy ampidirina infra-infiralaina koa izy io mba hanaovana an-tsoratra mandritra ny alina. Tsy maintsy manana feo fandraisam-peo koa. Koa, tsy maintsy ho mateza.
Manapa-kevitra amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana mety no farany niova: Desambra 5th, 2019 by Admin
3991 Total Views 3 Views Today